Funicular | RayHaber | raillynews
အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်ခြင်းကြောင့် ၃ နှစ်ခန့်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောကြောင့် UKOME သည်စျေးနှုန်းအသစ်ကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်မည့်အကောက်ခွန်နှုန်းအသစ်၊ အပြည့်အဝအီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် [ပို ... ]
Istanbul တွင်နေထိုင်သူများသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများကို Istanbul card အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်
အက်စတန်ဘူတိုမက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ် (BB) ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီBELBİM A. by. ကတီထွင်ခဲ့သောလျှောက်လွှာအသစ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်နေထိုင်သူများသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်ရှိအချက်အလက် matrix စနစ်မှတစ်ဆင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကို ၀ င်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရှေ့မြေထဲပင်လယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးပြပွဲ (EMITT) မှစီစဉ်သော TUYAP [ပို ... ]
IMM Assembly သည် ၀.၄ မှ ၄ နှစ်အရွယ်ကလေးများနှင့်သူတို့၏မိခင်များကိုအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်
importantBB ဥက္က0္ဌ Ekrem amomamoğlu၏ရွေးကောက်ပွဲကတိများအနက်မှ ၀ င် ၀ င်မှ ၄-၄ နှစ်ရှိကလေးငယ်များရှိသောမိခင်များအားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခမဲ့သွားလာခွင့်ကတိပေးမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းခဲ့သည်။ မနေ့က IMM ညီလာခံ၏အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည် [ပို ... ]
Mobile Trading Point Tools များဖြင့် Istanbukart တန်းစီ
Istanbulkart စင်တာများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်တန်းစီမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချရန် IMM သည်Mobileşlem Mobile Trading Point araç tools များကိုအသုံးချသည်။ Üsküdarတွင်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့သောမိုဘိုင်း application center သည်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှလူ ၁၂၀ ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသည် ၂ ဝဝ ၂ ခုနှစ်၏ဘာသာရေးနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များ၊ စာမေးပွဲရက်များနှင့်ကျောင်းဖွင့်ပွဲများတွင်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးလိမ့်မည်။ နှစ်သစ်ကူး၏ပထမနေ့၌အစ္စတန်ဘူလ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
နှစ်သစ်ကူးအတွက် Istanbulites မှitesဝံဂေလိတရားကို!
နှစ်သစ်ကူးအတွက် Istanbulites မှitesဝံဂေလိတရားကို! ; IMM ၏အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များသည် ၂၀၂၀ ၏ဘာသာရေးနှင့်တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်များ၊ စာမေးပွဲရက်များနှင့်ကျောင်းဖွင့်ချိန်များတွင်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူးပထမ [ပို ... ]
မြို့၏အရေးအကြီးဆုံးပြproblemsနာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Istanbul Metropolitan Municipality သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြissueနာကိုစားပွဲပေါ်တင်ထားသည်။ IMM ၏ဥက္ကPresident္ဌ Ekrem amomamoğluဖွင့်လှစ်မည့် Nstanbul ဆွေးနွေးပွဲအစ္စတန်ဘူလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း၏ခေါင်းစဉ်နှင့် 17-18 ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ညီလာခံ [ပို ... ]
သမ္မတနိုင်ငံနေ့၌အစ္စတန်ဘူလ်တွင်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ 29 အောက်တိုဘာသမ္မတနိုင်ငံ၏ 96 ။ IMM သည်ယခုနှစ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအခမ်းအနားများနှင့်အတူဆင်နွှဲရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဤအားလပ်ရက်တွင်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့ပြမြူနီစီပယ် (IMM) [ပို ... ]
ပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့များ၏ပါဝင်မှုများကအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ရထားစနစ်များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးစက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ။ အလုပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရထားလမ်းစနစ်ယခုအချိန်အထိပြုသောအမှုနှင့်၎င်းနောက်ယူခံရဖို့ခြေလှမ်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
လျှော့စျေး Den တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှ istanbulkart အနိုင်ရ
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluအဆိုပါတိုးချဲ့လျှော့စျေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်ဖြန့်ချိသည့်ပဏာမခြေလှမ်းများ၏နယ်ပယ်။ IMM ညီလာခံ, ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်စာမေးပွဲအတွက်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ် non-ကန်ထရိုက်ဆရာများကိုလည်းလျှော့စျေးအပြာရောင်ကဒ်မှအကျိုးတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအနည်ထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်3200 တထောင်သန်းကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမယနေ့သင်တန်းနှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသောမွို့၌ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မိဘသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များပေးရန်ရှိသည်။ နိုင်ငံသားများ, IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Imamoglu [ပို ... ]
တနင်္လာနေ့, အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စက်တင်ဘာလ9အခမဲ့သူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်
9 ကျောင်းစက်တင်ဘာလ 06, တနင်္လာနေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်: 00 - 14: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအကြား 00 နာရီအခမဲ့သင်အားငါပေးမည်။ 2019-20209စက်တင်ဘာလ 2019 ယင်းပညာသင်နှစ်တွင်တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 16 လူဦးရေသန်း [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် IMM ယာဉ်အသွားအလာကျောင်းဆန့်ကျင်တိုက်တွန်း
သင်တန်းတစ်နှစ်ယူဆောင်ရွက်မှုများကိုရှင်းပြအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) 2019-2020 ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, ပထမဦးဆုံးနေ့ကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးတော်မူမည်လိုသူမိဘများကျောင်းသို့သယ်ဆောင်လိမ့်မယ်။ နိုင်ငံသားများမှ [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Istanbul ကဒ်ကာလပိတ်
အဆိုပါ Volkswagen က Transporter စီးပွားဖြစ်မော်ဒယ်တူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မည်